त्रिवेणी धामले ल्याएको रौनक :: निर्मला क्षेत्री – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०५:३५ English
त्रिवेणी धामले ल्याएको रौनक :: निर्मला क्षेत्री
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महासमिति बैठक गत चैतको २६, २७, २८ र २९ गते नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न भयो । काङ्ग्रेसको अहिलेको मुख्य विषय नै आसन्न संविधानसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको समग्र रणनीतिकलगायतका विषयमा तयारी गर्नु थियो । महासमिति बैठकमा छलफलका विषय संघीयता, शासकीय स्वरुप, तराई–मधेश, जनजाति, महिला, दलित अल्पसंख्यक समुदायको सवाललगायत थिए । मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका निमित्त समाजवादी अवधारणालाई कसरी लागु गर्ने भन्ने विषयमा छलफलका सहभागीहरु केन्द्रीत बने । १४ अञ्चलका सहभागीहरुलाई १४ समुहमा विभाजन गरेर अत्यन्त नै सघन ढंगले ती सामयिक विषयमा छलफल भयो । सहभागीहरुबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु आए । यसबाट पार्टीलाई अबको निर्वाचनमा बहुमत कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघीयताको मुल मर्म भनेकै एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई विकेन्द्रीकरण गरेर जनताको सहज पहुँचमा पु¥याउने हो । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई नै प्रमुख लक्ष्य बनाएको छ । मुलुक संघीयतामा गई पुनर्संरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउनु पर्दछ भन्ने काङ्ग्रेसको पूर्वअडान छ । प्रदेशको नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको निष्कर्ष एकल जातिय पहिचान मात्र नभई जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासीक र भौगोलिक पहिचानको आधारमा नामकरण हुनु पर्दछ भन्ने रहेको छ । महासमितिको बैठकबाट पार्टीलाई गतिशील बनाउनको निम्ति विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपाल एउटा बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । राज्यको सबै भु–भागमा विविध जाति, धर्म र भाषाको मिश्रित बसोवास रहेको छ । त्यसकारण अब बन्ने प्रान्तहरु पनि बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक आधारमा हुनेछ । महासमितिको बैठकबाट यसबारे सुझाव र सल्लाह धेरै आएका छन् । बैठकको म्यान्डेडअनुसार ७ वटा अथवा बढिमा १३ प्रान्तसम्म जान सक्ने विषयलाई आधार बनाई विकल्पहरुका साथ छलफल भएको थियो । बोल्ने सदस्यहरुले सकेसम्म कमभन्दा कम प्रान्त हुनुपर्ने औंल्याए । तराईमा ५ र पहाडमा ८ गरेर १३ सम्म जान सकिन्छ भने पनि बैठकका सहभागीहरुबाट सकेसम्म थोरै राज्य बनाउनु पर्दछ भन्ने धारणा आयो । राज्यको श्रोत र साधनले धान्न सक्ने अवस्था अहिले नरहेकामा उनीहरु सचेत देखिन्थे । मूलकलाई कसरी समृद्धि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा बैठक केन्द्रीत थियो । नेपालको सम्पुर्ण प्राकृतिक श्रोत–साधनको सन्तुलित विकासद्वारा समग्र पङ्क्तिहरुको समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा आमसहमति बनेको छ । महासमिति बैठकका सहभागीहरु अत्यन्त उत्साहित थिए भने बैठकमा भएको आत्मबल र आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । एक ढिक्का भएर आगामी निर्वाचनमा जुट्नका निमित्त उनीहरु तयार छन् । नेतृत्वपङ्क्तिमा देखिएको एकताले नेपाली काङ्ग्रेसले आउँदो निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेतर्फ अघि बढ्न सहज अवस्था बन्ने देखिएको छ ।
चुनावको निम्ति स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरण बन्नु पर्दछ । सबै मतदाताको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनु पर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सरोकारको विषय हो । निर्वाचनको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ । बैठकमा सहभागीता उत्साह जनक थियो । यसकारणले उत्साहित छन् कि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट ५–५ जना महासमितिका सदस्यहरु र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक भयो । छलफलका माध्यमबाट विगत देखिएका सबैखाले अन्योल समाप्त भएको छ । निर्वाचनमा के–कस्ता कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने विषयमा छलफल भयो । सङ्क्रमणकालको समय छोट्याई, छिटो चुनावमा जानुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पारेको छ । त्यसैगरी जाति, जनजाति, आदिवासी, सिमान्तकृत, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गहरुको बारेमा प्रष्ट धारणा अगाडि सारेको छ । यो महासमिति बैंठकले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउन ठुलो मद्दत पुयाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनताका लागि र नेपाली जनता नेपाली काङ्ग्रेसको लागि भन्ने नाराका साथ अगाडी बढ्ने चुनावि घोषण पत्र तयार गरी जनता माझ जाने निर्णय गरेको छ । मलुकलाई सहि गतिमा अगाडि बढाउन र समयमा नै संविधान निर्माणको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको आवश्यकता खड्केको छ । मुलुक र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भित्र देखिएको गुट र उप–गुटलाई केन्द्र देखि गाउँ तह सम्म चिर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा पार्टी प्रतिको निष्ठा र सार्मथ्यलाई हेरेर संविधान सभाको निर्वाचनमा उमेदवार चैयन गर्नुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेस को महासमितिको बैंठकबाट भएको निर्णयलाई केन्द्र देखी गाउँ तह सम्म कार्यन्वयन गर्न सके मात्र महासमिति बैंठकको सार्थकता रहने छ ।
अहिले सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान निर्वाचन कहिले हुन्छ ? मुलुकले राजनितिक निकास कहिलेसम्म पाउँछ ? भन्नेमा नै केन्द्रित छ । देशमा अहिले राजनीतिक दलहरुको चुनावी सक्रियता बढेको छ । जतिसक्दो छिटो संविधानको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अठोट राजनीतिक दलहरुले गरेका छन । सरकार पनि छिटो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने तर्फ केन्द्रित देखिएता पनि निर्वाचनको मिति तोक्न किन सकिरहेको छैन ? यसप्रति राजनीतिक दलहरु समयमा नै सचेत हुनु त्यत्तिकै जरुरी छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभुत पक्ष तथा सााधन पनि हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताको इच्छा आकांक्षा नै सर्वाेपरि हुन्छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको छनोट, स्वतन्त्र, निष्पक्ष उवं निर्भयका साथ पाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन पद्धतिले नै जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गर्छ । विगतको संविधान सभाको निर्वाचन परिणामदायी हुन सकेन । राष्ट्रिय र लोकतन्त्रलाई सुद्धृढ गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने जनताको चाहना त्यो चुनावले पुरा गर्न सकेन । सविधान सभा चुनावको परिणाम अनपेक्षित र अप्रत्याक्षित थियो । तर भय र भ्रमको वातावरणमा त्यो भन्दा भिन्न नतिजा संभावत सम्भव थिएन । त्यसकारण आगमी दोस्रो संविधान सभा चुनावको परिणाम पहिलो संविधान संभाको निर्वाचनको जस्तो यदि हुन गयो भने फेरी संविधान वन्न सक्ने सम्भावना नै देखिदैन । यसले मुलुकलाई थप अन्यौल र अराजकतातिर धकल्ने काम मात्र हुनेछ ।
(नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
४ बैशाख २०७०, बुधबार १९:४० मा प्रकाशित
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:१९
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:१३
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट आज बुटवलमा २, चितवन र डडेल्धुरामा एक-एक जनाको मृत्यु भएको छ । बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार..